तिथि मेरो पत्रु »5लामो दूरी सम्बन्ध लोप लागि सुझाव – विद्यार्थी संस्करण
गर्मी समय एक विद्यार्थी अस्तित्व को एक सुन्दर भाग हो. यो बारेमा कुनै शंका. तपाईं स्कूल को धेरै वास्तविकता बारे बिर्सन प्राप्त, एक सानो आराम, आफ्नो तन मा प्राप्त, नरिवल बाहिर फल पेय पदार्थ पिउन, र आफ्नो परिवार र गृहनगर साथीहरूसित पुनः जोड्न. यो सबै साँच्चै राम्रो महान् सुनिन्छ.
एक साना विस्तार को लागि बाहेक ... तपाईं अपूर्ण महसुस. तपाईं आइसक्रिम बिना एक शंकु जस्तै छौं. चीज बिना पिज्जा जस्तै, एक wrecking बल बिना Miley साइरस जस्तै, आफ्नो क्लाइड बिना एकान्त रोपाइ.
म आफ्नो भाइचारा जुम्ल्याहा अलग बारेमा कुरा नगरेको; म "लामो दूरी अलग" भनिन्छ सम्बन्धमा कठिन समय सङ्केत छु. आफ्नो प्रेमी संग स्कूलमा आठ अद्भुत महिना बिताएपछि, तपाईं दुवै विशेष स्पार्क कि कायम गर्दा आफ्नो घर steads फर्कन र अलग हुनुको डोरी सिक्न.
तपाईं सजिलै हुन सक्छ र एउटै स्कूल जाने भयो गर्ने प्यारा केटी अर्को ढोका डेटिङ गर्न, वा तपाईं किलोमिटर द्वारा अलग हुन सक्छ, समुद्रले, शायद यो पनि महादेशका. यो समयमा कठिन हुन्छ र यो स्कूल वर्ष को पाठ्यक्रम मा तैयार थियो कि जडान कायम गर्न कुनै आसान उपलब्धि हो.
म तपाईं को लागि यहाँ छु खैर राम्रो कुरा.
पहिलो र प्रमुख, प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ.
यो केवल आफ्नो सम्बन्ध समर्पण गर्नेहरूले यो पछिल्लो बनाउने कुनै आश्चर्यको कुरा हो. आत्मा. बस्, यो पनि करीब दूरी सम्बन्ध लागि जान्छ. लगातार एक दैनिक आधार मा प्रत्येक अन्य देख्न गर्नुपर्छ भएर उत्साह को चरम भावना र दुवै पक्ष बाट लोयल्टी स्थायी छैन.
सबै ठूला प्रविधिको फाइदा लिनुहोस्, ग्याजेटहरू र मुद्रा.
हामी कम्प्युटर को एक डिजिटल संसारमा बाँच्न, सेल फोन र सर्वव्यापी प्रविधिको. फिर्ता दिन मा यो ... टेलिफोन मा कुनै को फोन गर्न उचित भाग्य खर्च आजकल हामी बिल्कुल मुक्त लागि संसारमा कुनै संग Skype सक्छ. हामी यो सजिलो छ, त्यसैले साँच्चै कुनै बहाना हुनुपर्छ. प्रविधिको प्रयोग गर्ने एक महान उपकरण छ, यो एक निरन्तर टेक्स्ट कुराकानी छ कि, फोनबाट कुरा, अनगिन्ती सामाजिक मिडिया आउटलेट वा Skype को एक. यो प्रयोग र अक्सर प्रयोग.
तपाईं केही रचनात्मकता र सरलता देखाउन तपाईं र तपाईंको अन्य महत्वपूर्ण सिर्जना अवसर बीच मा दूरी. वास्तविक कागज र एक वास्तविक कलम प्रयोग र एक पत्र पुरानो जमानाको बाटो पठाउन, फूल आफ्नो घर सुम्पिएको आफ्नो प्रेमी अचम्म (नम्बर उल्लेख2एक पुष्प पसल देखि अनलाइन र आदेश) वा यदि सम्भव छ भने क्लासिक आश्चर्य यात्रा गर्न. आफ्नो सोचाइ टोपी राख्नुहोस् र केही साँचो मौलिकता देखाउन.
सँगै खर्च गर्न प्राप्त गर्न समय थालेका छन्.
तपाईं यति लामो समयसम्म अलग हुनेछ किनभने, तपाईं एक यात्रा मा प्राप्त गर्न व्यवस्थापन र केही साहसिक मा जाने भने यो कुरामा कुनै शङ्का सुपर विशेष हुनेछ. म यो नोटबुक देखि वर्षा मा कि रोमान्टिक दृश्य जस्तै हुनेछ भनिरहनुभएको छु, तर यो धेरै नजिक हुनेछ.
यो संसारको अन्त छैन भनेर सम्झना.
हां यो कहिलेकाहीं गाह्रो हुन सक्छ र तपाईं भ्रूण स्थिति र whimper मा कर्ल गर्न चाहनुहुन्छ छौँ (म त्यहाँ भएको छु- लाज) तर दूरी गोप्य स्वस्थ छ सम्झना. आफ्नो साथी अलग्गै हुनु सँगै अधिक आफ्नो समय मोल मदत गर्नेछ र तपाईं ढिलो होस् वा पछि यो प्रयोग गरे गर्नुपर्नेछ. तिमी अझै अभ्यास सुरु भने राम्रो?
यी पाँच सुझाव गर्मी महिना लागि आफ्नो प्रेम गुरु रूपमा काम गरौं र तपाईं बस ठीक हुनेछु. आफ्नो अन्य आधा छ जहाँ तपाईं शायद एक लाख पल्ट "सोधे गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?"र" तपाईं अझै पनि what's-उनको-नाम डेटिङ गर्दै?हो / म उहाँलाई निरन्तर कुराकानी छु उनको "तर अब तपाईं निर्धक्क जवाफ दिन सक्नुहुन्छ" र तिनीहरूले आफ्नो घर मा हाल छौं "र", तपाईं "म हुँ शर्त.